एनसेल कर प्रकरण : सर्वौच्चको फैसला कति ठिक ? - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more एनसेल कर प्रकरण : सर्वौच्चको फैसला कति ठिक ? - www.khabardabali.com
एनसेल कर प्रकरण : सर्वौच्चको फैसला कति ठिक ?
अशोज २ गते, २०७६ - १३:२२
काठमाडौं । दुरसञ्चार प्रदायक निजी कम्पनी एनसेल खरिदबिक्री बापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाभ कर सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको पाँच जनाको पूर्ण इजलासले गरेको फैसला न्यायधीश तेजबहादुर के.सी. नेतृत्वको पाँच जनाकै पूर्ण इजलासले गत भदौ ९ मा खारेज गरेपछि सर्वोच्चको फैसला विवादमा तानिएको छ ।
०७५ माघ २३ गते जबरा नेतृत्वको इजलासले करको दायित्व एनसेल र एक्जियटासँग हुने भन्दै तीन महिनाभित्र एनसेलसँग कर उठाउन आदेश दिएको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ आएको तीन दिनभित्रै ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलको अग्रिम भुक्तानी रकम घटाएर बाँकी ३९ अर्ब लाभ कर ७ दिनभित्र तिर्न ०७६ साल ३ गते एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । तर, एनसेलले उक्त पत्रको व्यवास्था गर्दै विशेष गरी आय कर ऐनको दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण प्रकृया शुरु गर्न र आय कर ऐन दफा १२० अनुसार लगाइएको शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
यसै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आफैँले गरेको पहिलाको फैसला बदर गर्दै संक्षिप्त फैसला सुनाएपछि सडकदेखि संसदसम्म फैसलाको व्यापक विरोध भएको हो । यस्तै, संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत सांसदहरुले यस विषयमा प्रश्न उठाएपछि समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि आवश्यक छलफल गरी एउटा निचोडमा पुग्ने मनस्थितिमा रहेका छन् ।
एनसेलको लाभ करको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश के त्रुटिपूर्ण छ ? के अदालतको फैसलामाथि संसदमा छलफल हुन सक्छ ? संसदले अब के गर्न सक्छ ? कानून, न्याय र मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, नेकपाका नेता तथा समितिका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा समितिकै अर्का सदस्य बालकृष्ण खाँडसँग खबर डबलीको तर्फबाट गणेश पाण्डेले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश :
अशोज २ गते, २०७६ - १३:२२ मा प्रकाशित
पहिलो कुरा त कर उठाउने विषयमा कानूनमा जे लेख्या छ अदालतले त्यहि गर्ने हो । अर्को कुरा एउटै मुद्दामा कहिले लाभ कर उठाउ भन्ने कहिले उठाउन पाउँदैन भन्ने खालको जुन विवादास्पद फैसला सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ यसले शंका उत्पन्न भएको छ । माघ २३ गते प्रधानन्यायधीस सहितको पूर्ण इजलासले पूँजिगत लाभ कर तिर्नु पर्ने फैसला गरेको थियो । अहिले तिर्नु पर्दैन भनेको छ । यसले गर्दा राज्यलाई अर्वौ घाटा परेको छ । एनसेल जस्ता अर्र्बौै व्यपार गरेको बहुराष्ट्रिय कम्पनिले कर उन्मुक्ति पाउनु त्यो न्यायसंगत छैन । सामान्यतय पूँजिगत लाभकर उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । त्यसकारण अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुन सक्छ । फैसलाको पूर्ण कपि आएपछि यसलाई पुनरावोलोकन हुनुपर्छ ।
पाँच जनाको इजलासले गरेको निर्णय उल्टाउन पनि ७ जना वा ९ जनाकाको बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्नु पर्छ । त्यसो किन भएन ? पुनरावलोकन गरेर यसलाई करेक्सन गर्नु पर्छ । यसो भन्दैमा अदालतको एक दुईटा फैसलाको आधारमानै अविश्वास गर्नु त हुदैन । अदालत संविधानले निर्दिट गरेको एक सस्था भएकोले यसले गरेको कतिपय त्रुटि सच्याउने विधि र प्रकृया पनि अदालतभित्रै रहेको छ । त्रुटि सच्चिनुपर्छ ।
फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेपछि सरकारको तर्फबाट कर कार्यलय तथा विभागको तर्फबाट पुनरावलोकनको लागि जान सक्छ । जानुपर्छ । फैसलाप्रति चित्त बुझ्न नबुझ्नु भन्दा पनि यसलाई न्यायीक तरिकाबाट हेर्नु पर्छ । विगतमा एनसेल सम्बन्धी व्यवस्था के छ ? त्यो हेर्नु पर्छ । एनसेल सम्बन्धी आयकरको व्यवस्था पनि छ, पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थापनि छ । समयमा कर नतिरे शुल्क लगाउने व्यवस्थापनि छ । राज्यले सबै कम्पनिलाई करको दायरामा ल्याएको छ । सबैले कर तिरिरहेका छन् । एनसेललाई मात्र लाभांस करबाट उन्मिुक्ति दिन मिल्दैन । अरुलाई कर लाग्ने एनसेललाई कर नलाग्ने त्यो हुन सक्दैन । कानून त सबैलाई बराबर हुनुपर्छ । यसलाई न्यायको सिद्धान्त आधारमा, अन्तराष्ट्रिय प्राक्टिसको आधारमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा हेर्नु पर्छ ।
सर्वोच्च अदालतकै आचार संहिताको पालना भएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्छ । विगतमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा केस हेरिसकेको छ न्यायधिशले दोर्याउन नपाउने आचरसंहिता थियो । त्यो पालना भएको छ या छैन ? विगतमा ठुला करदाताले एनसेलको लाभांस रोक्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएपछि राष्ट्र बैंकले लाभांस रोक्का गरेको थियो । तर माननीय न्यायधिश डम्बर बहादुर शाहीले एनसेलको लाभाम्स कर विदेश लान पाउने फैसला गर्नु भएको थियो । त्यसकारणले प्राकृतिक न्यायको हिसावले उहाँले मुद्धा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? यस्ता त्रुटिहरु सच्याउने निकाय संसद नभइ अदालतनै हो यस्तो गम्भिर विषयमा सम्मानित अदालतको ध्यान जानु जरुरी छ ।
(गुरुङ नेकपाका प्रमुख सचेतक हुन्)